अनमोलको प्रिय किन छन् अनुप ? निखिलदेखी अनमोल सम्मलाई अनुपको खाँचोFilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
अनमोलको प्रिय किन छन् अनुप ? निखिलदेखी अनमोल सम्मलाई अनुपको खाँचो
फिल्मी फण्डा । मिलन चाम्सको देब्यु निर्देशन रहेको फिल्म हँसिया बाट नेपाली रजटपटमा आएका नायक हुन अनुप बिक्रम शाही । ब्यवसायीक रुपमा पहिलो फिल्म राम्रो नभएता पनि अनुपको संभावना राम्रै देखिएको थियो । पहिलो फिल्म नै एक्शन भएर होला सायद उनलाई सबैले एक्शन नायककै रुपमा हेर्ने गरिन्छ । उनै अनुप बिक्रमको दोश्रो फिल्म वीर बिक्रम प्रदर्शन भएपछि उनको चर्चा झन चुलिएको थियो ।
त्यसपछी अनुप सबैको रोजाईमा परे । नेपाली फिल्ममा कमब्याक गरेका एक्शन स्टार निखिल उप्रेती पछि एक्शन नायकको रुपमा सबैको रोजाईमा अनुप पर्न थाले । दयाहाङको वीर बिक्रम देखी कृ मा अनमोल केसीसंग पनि अनुपकै खाँचो परेको देख्न सकिन्छ । उनले सौगातसँग सौर्य, निखिल उप्रेतीसंग किंङ्ग, अनमोल केसीसँग कृ मा अभिनय गरेका छन् । सकरात्मक र नकरात्मक दुबै भुमिकामा आफुलाई प्रस्तुत गर्न सक्ने अनुप सिंगल थिएटरका निखिल देखी मल्टिप्लेक्सका अनमोल केसी सम्मलाई चाहिने एक मात्र नायक हुन् ।
त्यतिमात्र नभईकन फरक फरक भुमिकामा देखिन्न मनपराउने अनुपले कमलेको बिहे र फुर्केमा फरक फरक भुमिका निर्बाह गरेका छन् । तिनै अनुप अबभने प्रदिप खड्कालाई पनि खाँचो भएको हो । अनुपले फिल्म लिलिबिलीमा प्रदिप संगै काम गर्ने भएका छन् ।
हाल फिल्म भिरागांना, निशाफ र आर्या मा ब्यस्त अनुप फिल्म लिलिबिलीको लागी आउने डिसेम्बरमा लण्डन जादैछन् । बर्षमा आधा दर्जन भन्दा माथी फिल्म खेल्ने गरेका अनुप प्राय सबैको रोजाईमा पर्ने कलाकार हुन् । यसपछि अनुप नेपाल र अष्ट्रेलियामा छायांकन हुने एक फिल्ममा ब्यस्त हुनेछन् ।
औपचरीक घोषणा गर्न बाँकी भएको उक्त फिल्ममा अनुप माला लिम्बु र बुद्वि तामाङ्गसंग देखिदैछन् । यसर्थ पछिल्लो समय अनमोल केसीको प्रिय बनेका अनुप सिंगलदेखी मल्टिप्लेक्स सम्मका सबै कलाकारलाई खाँचो भएको छ ।